पहिलो जागिरको कथा
by Anuj Bhai April 19, 2020
दक्षिण एसिया नेपाल इश्वरले श्रृष्टि गर्नुभएको अति सुन्दर देश हो । यो ठाउँमा असिमित सम्भावनाहरु छन् । तर दुःखलाग्दो राजीतिक अस्थिरताको कारण त्यो सम्भावनाको ढोकाहरु अझै पनि बन्दको बन्दै छ ।
त्यसो त अवसर पाएको खण्डमा नेपालीहरु मेहनत गर्न पछि पर्दैन । यहाँ दुःख गरेर शिक्षा आर्जन गर्नेहरु पनि प्रशष्त छन् तर आफुले आर्जेको शैक्षिक योग्यताअनुसारको अवसर प्राप्त गर्न भने साहै्रै मुस्किल छ ।
मेरो गाउँमा मैले निम्न माध्यमिक पढाई सकाए । त्यसपछि काठमाण्डौ शहरमा सन् २००४ मा आफ्नो स्कुले पढाई सकाउन आए र लगभग २०१० को अन्तिमतिर मेरो स्कुलको सबै तहको पढाईहरु समाप्त भयो ।
अब आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नुपर्छ भनेर अभिभावकहरुले पनि मलाई भन्न थाले । त्यसपछि पो जिबनको संघर्षको कथाहरु सुरु भए ।
सुरुवातमा मेरो संघर्षको पाइला हर्बल प्रडक्टहरु घरघरमा लगेर बेच्ने मार्केटिङ कामबाट सुरु भएको हो । पहिलो चोटी जागिर खान थालेको मेरो जिबनको त्यो रोमाञ्चक दिन अझै पनि ताजा छ । कसरी बेच्ने, कहाँ बेच्ने, के भन्दै बेच्ने त्यो केहि थाहा थिएन मलाई ।
झोलामा कम्पनीका मान्छेहरुले सामान प्याक गरिदिन्थे । अनि म झोला बोकेर शहरको गल्लि गल्लि हिड्थे । आफ्नो सामान बाटोको मानिसलाई देखाउन डर लाग्थयो । डर सँगै एककिसिमको काउकुति लाग्थ्यो ।
Join Elite Version Training : Join Here
यसरी सुरुमा नबेचि अफिस फर्किन्थे । जसलाई जुस भन्ने गर्दा रहेछन् ।
त्यो कामबाट मलाई केहि उपलब्धीहरु हासिल भएन । काम छाडे । घरैमा बस्न थाले ।
लगभग ११ महिनापछि मैले एउटा पत्रिकामा बिज्ञापन देखे “नेपाली र अंग्रेजी टाइपिङ गर्न जान्नेहरुलाई जागिरको अवसर । सम्पर्क नं …..” ।
मलाई टाइपिङ राम्रो नै आउथ्यो । म त्यो सम्पर्क नं मा फोन गरेर अफिसमा गए ।
गएर त्यो अफिसको मानिसलाई मैले भने “कतै यो हर्बल प्रडक्ट बेच्ने काम त हैन ?”
उनले भने “यो त्यस्तो काम हैन । यो त वेबसाइट भिजिट गरेर कमाउने काम हो । जति धेरै वेबसाइट भिजिट गर्नुहुन्छ । उत्ति धेरै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ”
म छक्क परे । वेबसाइट मात्र भिजिट गरेर पनि कसरी कमाई हुन्छ ?
बकवास पनि लाग्न थाल्यो । पछि गएर त्यो अफिसको काम सिकाउने इन्स्टिच्युटमा गएर बुझे । त्यहाँ थाहा पाए । त्यो काम ब्लगिङ सम्बन्धि काम रहेछ ।
त्यसो त जानी नजानी त्यो अघि पनि म ब्लग चलाउने गर्थे तर आम्दानी हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएन । त्यस ठाउँमा म आम्दानी नभए पनि थुप्रै कुराहरु सिक्ने अवसर भो । मलाई मन पर्यो । म त्यहाँ आउने नयाँहरुलाई पनि सिकाउने गर्थे । मेरो त्यो काम देखेर मलाई सिकाउनुहुने त्यहाँका शिक्षकले पढाउने काम पनि दिलाईदिनुभयो ।
त्यो समयमा यस्तो किसिमको कामलाई साह्रै अपत्यारिलो ठान्थे । कसैले पत्याउदैन थिए । त्यो लगभग सन् २०११ तिर ने हुनुपर्छ ।
२/३ बर्षको मेरो समय मैले त्यसरी नयाँ नयाँ ब्यक्तिहरुलाई सिकाउदैमा बित्यो । चाँहे जस्तो सफलता हासिल भएन ।
घरमै बसेर आफ्नो विद्यार्थी साथीहरुलाई पढाउदै । सन् २०१९ नोभेम्बर ।
उमेर बढ्दै गयो । बिस्तारै यथार्थ कुराहरु बल्ल बुझे । त्यसपछि म एमएलएम बिजनेशमा आवद्ध भएर काम गरे । एउटा कम्पनी मा निकै राम्रो मेरो टिम ब्युल्ड भइसकेको थियो । तर पछि गएर कम्पनी स्काम भइदियो । त्यो कम्पनीबाट नि राम्रै आम्दानी भएतापनि केहि पैसाहरु गुमियो । साथीभाई गुमियो । पछि गएर नेपालमा त्यस किसिमको कामलाई इलिगल ठहर गर्यो ।
सन् २०१६ तिर आएर जिबनमा एककिसिमको मानसिक संघर्षहरु सुरुवात भयो । सबै किसिमका कोशिषहरु गरिरहदा पनि चाहेजस्तो सफलता हासिल नहुदा मनमा एककिसिमको उकुशमुकुश पैदा भयो । अब के गर्ने ?
सोचे र आफैलाई प्रश्न गरे “जिबनमा तैले के के उपलब्धी हासिल गरिस् ? अनि के के कुराहरु जानिस् ?”
आफैलाई उत्तर दिए “मैले जानेको अनलाइनमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । त्यसमा धेरै सुनौलो अवसर छ । मैले त्यहि गर्नुपर्छ ।”
समस्या थियो । यो ठाउँमा यस्तो कुरा वाइयात हुनेछ । झनै अपत्यारिला हुनेछ ।
यहाँनेर तपाईहरुलाई एउटा कुरा जोडु । म गीत गाउन शौखिन छु । भलै म राम्रो गायक होइन । धेरथोर गाउने प्रयाश गर्छु । अनि बेलुकीको समयमा म गीत गाउनलाई रेष्टुरेन्टमा काम माग्न जान्थे । मेरो गायन कला देखेर उनिहरुले कम्तिमा मलाई बेलुका गीत गाउने जागिर दिए ।
अर्को महिनाको एकदिनमा त एकै दिन २०० डलर आम्दानी जम्मा भएको देखेपछि बिस्तारै लाग्न सुरु भयो । अनलाईनमा साच्चिकै सम्भवन नै रहेछ ।
त्यो समयमा म दिनको जागिर पनि थियो । जागिरबाट बचेको समयमा मैले समय दिएर । १४ महिनामा लगभग ८००० डलर नेपालमै आम्दानी भएपछि मैल जागिर छोडे र पुरा समय यसमै सिमित राखे । यो सम्बन्धि अझ धेरै कोर्षहरु गरेर सिकेर यसैलाई नेपालमा पनि प्रमोट गर्ने मनाशय आयो ।
म दक्षिण एसियाको एक बिकासन्मुख देशबाट यो अपत्यारिलो काम घरमै बसि बसि गर्छु भन्नु मेरो समाजमा यो कुरालाई साच्चिकै पत्याउदैनन् ।
तर अन्य बिकसित देशहरुमा यस्तो कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
म मेरो देशको युवाहरुलाई यो कुरा सिकाउन चाहान्छु । म मेरो आफ्नो गवाही हरेकलाइ बाड्न चाहान्छु ।
यहाँहरुले यो मेरो छोटो कहानी सुनिदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।
अहिले म फुलटाइम इन्टरनेट मार्केटरको रुपमा आफुलाई चिनाउन चाहान्छु । तपाई पनि इन्टरनेट मार्केटिङमा रुचि छ , यसमा मेहनत गर्न चाहानुहुन्छ भने म संग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
Tags: Anuj Bhai Blog, best business in nepal, business idea in nepal, business in nepal, business nepal, earn money online in nepal, good business in nepal, how to make money online in nepal, how to start online business in nepal, Internet Marketing, Internet Marketing In Nepal, make money online in nepal, nepal, nepal business, Nepalese Internet Marketer Story, Online Business Course In Nepal, online business in nepal, Online Business Nepali Course, online job in nepal, online job nepal, online jobs in nepal, small capital business in nepal, top 10 business in nepal
एकदमै राम्रो लेख छ अनलाइन मार्केटिङ मा केही गर्न चाहनेहरुको लागि सही गाईड गरेको छ।अझै यस्तै अनुभवहरु समेटेको लेखहरु पढ्न पाइरहियोस ।
Bedraj Rana (राज श्री राणा)